नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउँदै सकियो १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउँदै सकियो १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद
मंसिर २४, २०७६ | आजको अर्थ
दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको १३ औं संस्करणमा खेलकुदका साथै सबै विधाका खेलहरु सकिएका छन । यसपटकको साग नेपालका लागि निकै उपलब्धिमुलक रह्यो । सागको इतिहासमा पहिलो पटक ५० स्वर्ण पार गरेको नेपालले यसै सागमा सागमा स्वर्ण संख्या पनि १०० कटायो ।
यतिमात्र होइन, सागको इतिहासमा पहिलो पटक धेरै खेलमा नेपालले स्वर्ण जित्न सफल भयो । यसपटकको सागमा नेपालले १२ वटा फरक खेलमा स्वर्ण जित्न सफल भयो । यसपटकको सागमा नेपालले एथ्लेटिक्स, पौडी, बक्सिङ, भारत्तोलन, फुटबल, कराते, तेक्वान्दो, साइक्लिङ, ट्रायथोलन, जुडो, उसु लगायतका खेलमा स्वर्ण हात पार्यो ।
नेपालले कुल २६ खेलमा २५ खेलमा पदक जित्यो । नेपालले स्वर्ण जित्न नसकेको खेल भनेको सुटिङ मात्र रह्यो । यतिमात्र होइन, यसपटकको सागमा नेपालले इतिहासमा नै पहिलो पटक पदक तालिकाको दोस्रो स्थानमा रह्यो ।
सन् १९९९ पछि नेपालले घरेलु मैदानमा फुटबलमा स्वर्ण जित्न सफल भयो । यस्तै यहि सागमा नेपालका धेरै खेलाडीले कीर्तिमान बनाए, चाहे त्यो पहिलो पटक स्वर्ण जित्नु होस या एकै सागमा दुई वा त्यो भन्दा बढि स्वर्ण जित्नु ।
करातेबाट सुरु भएको नेपालको पदक अन्तिममा फुटबलमा पुगेर सकियो । घरेलु भूमीको फाइदा पनि पाएको नेपालका लागि अल्टिच्युटले पनि निकै राम्रो साथ दियो । विदेशी खेलाडीले अल्टिच्युटका कारण राम्रो गर्न नसक्दा नेपालले त्यसका फाइदा उठाए ।
नेपालमा साग हुन्छ की हुँदैन भन्ने अन्योलताका विच साग सम्पन्न भएको छ । यसपटक जुन किसिमको तयारीले भएको थियो, त्यो हिसावले नेपालले सफल रुपमा आयोजना गर्यो । पुर्वाधारको तयारी अन्तिम समयसम्म हुनु, खेलाडीले आफ्नो प्रतियोगिता भेन्युमा नै तयारी गर्न नपाउनु यसपटकको सागमा कमजोरी रह्यो ।
यसका साथै ब्यवस्थापनका हिसावले भने नेपाल कतै न कतै चुक्न पुगेको थियो । सागको जस्तो ब्यवस्थापन नलागेपनि नेपालले सक्दो प्रयास गर्यो । जस्तो सुकै कमजोरी भएपनि त्यसलाई नेपालले जितेको पदकले छोपिदियो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेश सिलवालले साग त सकियो, तर आफ्नो काम अब झन दोब्बर बढेको बताए । उनले आफु चार महिना अगाडी आउँदा सागको तयारीको चटारो थियो, तर अब साग सकियो, अरुले काम सकियो सोच्छन होला, तर अब काम झन दोब्बर भएको छ । सागको समिक्षामात्र होइन, अब नबौ खेलकुदको तयारीमा अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्नेछ ।
यसपटक जुन किसिमले सागको आयोजना भयो, आशा गरौ नबौ राष्ट्रिय खेलकुदपनि हतार हतारमा अन्तिम समयमा नहोस भन्ने आशा गरौ ।
मन्दिर बनाउन अर्बाैँ खर्चने सरकारकाे लाजमर्दाे काम : पहिराे जाने थाहा हुँदाहुँदै तारजाली नपाएर गुमाए लिदीमा ३८ जनाले ज्यान
अब स्वाव दिएकाे ४५ मिनेटमै कोरोना रिपोर्ट
कोरोनाविरुद्ध रूसले बनाएकाे खाेपलाई अमेरिकाकाे समर्थन, ट्रम्पले भने 'खोप बनाउने रुस पहिलाे राष्ट्र'
विश्व साउन ३१, २०७७
एकै दिन दुई भारतीय क्रिकेटर धोनी र रैना को सन्यास
खेलकुद साउन ३१, २०७७
समाचार साउन ३१, २०७७
बाणिज्य बैंकहरुको नाफा १२% ले घट्यो, कुन बैंकको कति नाफा ?
बैंक-वित्त साउन ३१, २०७७
भाइरसबाट प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्नका लागि १.४६ ट्रिलियन डलर लगानी गरिने ः मोदी
दलित पत्रकारहरुको कोरोना बीमा
मुख्य समाचार साउन ३१, २०७७
खेलकुद मंसिर १५, २०२०
समाचार मंसिर १५, २०२०